Забур 44 CARS - Nnwom 44 AKCB
1Ao, Onyankopɔn, yɛde yɛn aso ate;
nea woyɛɛ wɔ wɔn bere so,
wɔ tete mmere no mu.
2Wode wo nsa pam amanaman no
na wobɔɔ yɛn agyanom atenase;
wodwerɛw nnipa no
na womaa yɛn agyanom dii yiye.
3Ɛnyɛ wɔn afoa na wɔde nyaa asase no,
na ɛnyɛ wɔn nsa na ɛmaa wɔn nkonimdi;
ne wʼanim hann, efisɛ na wodɔ wɔn.
4Woyɛ me Hene ne me Nyankopɔn,
nea ɔhyɛ nkonimdi ma Yakob.
5Ɛnam wo so na yɛpam yɛn Atamfo;
wo din mu na yetiatia wɔn a wokyi yɛn no so.
6Memmfa me ho nto mʼagyan so,
mʼafoa remfa nkonimdi mmrɛ me;
7na wo na woma yedi yɛn atamfo so
wugu wɔn a wɔtan yɛn no anim ase.
8Onyankopɔn mu na yɛhoahoa yɛn ho da mu nyinaa,
9Nanso mprempren woapo yɛn abrɛ yɛn ase;
wone yɛn asraafo nkɔ ɔsa bio.
10Woma yeguan fii dɔm anim,
ma yɛn atamfo fom yɛn agyapade.
11Wuyii yɛn maa sɛ wonkum yɛn sɛ nguan
12Wotɔn wo nkurɔfo fofoofow,
na woannya mfaso biara amfi mu.
13Woayɛ yɛn ahohorade ama yɛn afipamfo,
animtiaabude ne aserewde ama wɔn a wɔatwa yɛn ho ahyia.
14Woayɛ yɛn kasabebui wɔ aman no mu
na nnipa no wosow wɔn ti de gu yɛn so.
15Mʼanimguase di mʼanim daa,
na aniwu akata mʼanim,
16esiane wɔn a wɔbɔ me ahohora na wɔkasa tia me de yi me ahi,
esiane ɔtamfo a nʼani abere sɛ ɔbɛtɔ were no nti.
17Eyinom nyinaa too yɛn de,
nanso yɛn werɛ mfii wo,
na yemmuu wʼapam no nso so ɛ.
18Yɛn koma ntwe mfii wo ho;
na yɛn anan nso mman mfii wo kwan so ɛ.
19Nanso wodwerɛw yɛn yɛɛ yɛn sakraman tu
na wode sum kabii kataa yɛn so.
20Sɛ na yɛn werɛ afi yɛn Nyankopɔn din
anaa sɛ yɛatrɛw yɛn nsam akyerɛ ananafo nyame a,
21anka Onyankopɔn behu,
efisɛ onim koma mu ahintasɛm.
22Nanso wo nti wokum yɛn daa nyinaa;
wobu yɛn sɛ nguan a wɔrekokum wɔn.
23Nyan, Awurade! Adɛn nti na woada?
Keka wo ho! Nnyaw yɛn hɔ afebɔɔ.
24Adɛn nti na wode wʼanim ahintaw
na wo werɛ fi yɛn ahohia ne nhyɛso?
25Wɔabrɛ yɛn ase kɔ dɔte mu
na yɛn nipadua aka afam dɔte.
wʼadɔe a ɛnsa da no nti, gye yɛn.
AKCB : Nnwom 44